LG sy Atlético de Madrid dia miara-miasa amin'ny Wanda Metropolitano | Vaovao momba ny gadget
LG sy Atlético de Madrid dia miara-miasa amin'ny Wanda Metropolitano ara-teknolojia kokoa
Ny baolina kitra sy ny teknolojia dia miray hina hatrany, Intel dia iray amin'ireo orinasa niditra tanteraka tao amin'ny ligin'ny Santander hanavao ny sary 360-degree izay ahafahantsika mahita ny baolina kitra miaraka amin'ny maso hafa, ny mason'ny mpijery izay tsy hitany mihitsy ny zava-drehetra. fomba mahafinaritra toy izany. Na izany aza, manome ny anjarany ihany koa ireo klioba raha ny amin'ny fananganana kianja vaovao amin'ny fomba maharitra sy ara-teknolojia, ity no tranga misy an'i LG sy Atlético de Madrid, ny ekipan'ny Cholo Simeone dia hanana efijery tsara indrindra eny an-tsena noho ny atsimo. Mpamatsy Koreana, Ny tanjona dia ny hanaitra ny endrik'ireo mpanao kidoro rehetra amin'ny sarin'izy ireo ary hampamirapiratra ny hazavan'ny Wanda Metropolitano amin'ny hazavany manokana.
LG dia hametraka efijery miaraka amin'ny teknolojia OLED manodidina ny kianja iray manontolo, hampiroborobo ny fanjifana angovo maharitra sy ny kalitaon'ny sary tsara indrindra ao anaty singa iray. Izy io dia natao ho fiaraha-miasa amin'ireo mpitantana ny klioba fametrahana teknolojia mifanaraka amin'ny fanamby amin'ny ho avy.
LG Electronics sy Atlético de Madrid androany dia manambara fifanarahana iray izay hananan'ny kianja vaovao an'ny klioban'ny Madrid, "Wanda Metropolitano", ny vahaolana teknolojia LG mandroso indrindra hatreto. Ny tetik'asa notarihan'ny faritra matihanin'ny LG Electronics Spain, LG Partner 360, dia hitondra efijery matihanina vaovao indrindra, fahitalavitra ary vahaolana amin'ny takelaka ivelany avy amin'ny LG ho any amin'ny zoro rehetra amin'ny kianja vaovao rojiblanco.
Anisan'ireo vahaolana hafa, "Wanda Metropolitano" no hanana videowall ivelany ivelany LG lehibe indrindra ampiharina amin'ny toerana fanatanjahantena. Mihena hatrany ny kely ka ny mpikambana sy ny mpankafy ny klioba eto Madrid renivohitra dia afaka mijery ny mason'izy ireo ny fametrahana teknolojia rehetra izay hananan'ny Wanda Metropolitano na anatiny sy ivelany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » LG sy Atlético de Madrid dia miara-miasa amin'ny Wanda Metropolitano ara-teknolojia kokoa
tsy misy virus intsony dia hoy izy:
Tsy isalasalana fa tetik'asa tena tsara, marina fa ny teknolojia sy ny baolina kitra, ary manantena ny kianja filalaovana vaovao ihany koa, tena mahaliana ilay lahatsoratra, misaotra ny fandraisana anjara Miguel.
Aza mamaly viriosy intsony
Ny Google Assistant dia efa mahalala ny teny Espaniôla, saingy an-tsoratra ihany